Qaramada Midoobay oo sheegtay in 2020 ay barakaceen in ka badan 80 Milyan | Banaadir Times
HomeUncategorisedQaramada Midoobay oo sheegtay in 2020 ay barakaceen in ka badan 80...
Qaramada Midoobay oo sheegtay in 2020 ay barakaceen in ka badan 80 Milyan
Qaramada Midoobay ayaa Warbixin ay soosaartay waxa ay kusoo bandhigay dalalka ugu badan ee sanadkaan 2020 colaadda ka jirta awgeed looga barakacay & tirada lagu qiyaasayo qoysaska naftooda la baxsaday.
Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Dalalka hoos ku xusan ay yihiin kuwa ugu badan ee dadkoodu ka barakaceen isku dhacyada & xasilooni darrada ka taagan:
Suuriya, Bartamaha Gobolka Afrika ee Saaxil, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo (DRC), Mozambique, Soomaaliy iyo Yemen oo wali ay kasii socdaan xasaradaha sababta u ah in ay sii barakacayaan qoysas horleh.
Madaxda Dalalkaas ayaa Warbixinta lagu sheegay in aysan mas’uuliyad iska saarin joojinta dagaallada oo ah gunta firxadka Malaayiinta ruux ee kunool guud ahaan Caalamka sida Qaramada Midoobay ay sheegtay.
Xaaladda Xayiraadda Covid-19 ee dalalka Caalamka ayaa sii cakirtay nolosha & socodka qoysaska aan u dulqaadan Karin dagaalka & dhibaatooyinka laga dhaxlo musiibooyinka dabiiciga ah.
Madaxa Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay ee loosoo gaabiyo UNHCR Filippo Grandi ayaa maanta oo Arbaco ah sheegatay in wax laga yaq-yaqsado (Laga xishoodo) ay tahay in damiirka uu ka weekday badbaadinta dadkaan.
“Waxa aan ka tallaabsaneynaa ka gudubka Caqabadaha si aan usii wadno mas’uuliyad darrada hoggaamiyaasha Caalamka ee la xiriirta joojin la’aanta dagaalada” Sidaasi waxaa yiri Madaxa UNHCR.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay in sanadkii tagay 2019-kii guud ahaan Caalamka ay ka barakaceen 79.5 Milyan oo ruux, ku dhawaan 30 Milyan oo kamid ah dadkaas waxa ay iska dhiibeen xeryaha Qaxootiga.
Caqabadda ugu weyn ee Qaramada Midoobay ka heysata gacansiinta qoysaskaas waa in aysan dhaqangelin Xabad joojinta, taasi waxa ay dhabarjab ku tahay u gurmashada qoysaskaas sida uu sheegay Antonio Guterres Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay.
Tirada dadka la dilay waxa uu ku sheegay in ay kor u dhaafeyso 1.5 Milyan oo ruux, waxa uu ku baaqay in aan laga maarmin in miiska wada hadalka lagu xaliyo wax waliba oo cabasho laga soo gudbiyo.
Previous articleSheikh Sabah oo mar kale loo magacaabay Ra’iisul wasaaraha Kuwait
Next articleKenya & Itoobiya oo ammaanka Xadka ay wadaagaan u adkeeyay Safarka Abiy Ahmed.